Maxaa lagu xushay gabadha ugu quruxda badan Soomaaliya? | Warbaahinta Ayaamaha
MUQDISHO-AYAAMAHA-Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay tartan loollan qurux ah oo u dhaxeeya gabdhaha Soomaaliyeed ee daneynaya munaasabaddaas, kaasoo ay martigalisay shirkadda Quman Fashion Show.
Muno Maxamed Diirshe oo ka mid ahayd garsooreyaashii tartanka ee go’aaminayay qofka kaalinta koowaad la siinayo.
“Waxaan ku xulannay quruxdeeda, aqoonteeda, akhlaaqdeeda, diinteeda, dad la dhaqankeeda, dabeecaddeeda iyo wajigeeda furan, sida qosolkeeda, daymadeeda iyo naxariisteeda,” ayay tiri Muno si guud u koobeysay waxyaabaha laga eegayay gabdhaha tartanka ka qayb galay.
“Waxyaabaha loo xushay maku jirin deegaan, maku jirin qabiil iyo dhammaan waxyaabaha ay dadka sheegaan,” ayay sii raacisay hadalkeeda.
Sida ay Muno sheegtay, intaas waxaa sii dheer in gabdhaha tartamayay waxyaabaha laga eegayay ay ka mid yihiin arrimaha aad loo sheego marka laga hadlayo quruxda, sida “dhex yar, dhirir iyo waji soo jiidasho leh”.